ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် | ဧပြီ ၂၀၀၈
ဖတ်လို ဂျပန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ပီရူး လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ပေါ်တူဂီ (ဘရာဇီး) မြန်မာ ရိုမေးနီးယား ရုရှား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဟီလီဂေနွန် အင်္ဂလိပ်
“ယေရှုချစ်တော်မူ” သော တပည့်ဖြစ်သူယောဟန်သည် ယေရှု၏ဘဝနှင့်ဓမ္မအမှုမှတ်တမ်းကို နောက်ဆုံးရေးသားသူဖြစ်၏။ (ယော. ၂၁:၂၀) အေဒီ ၉၈ ခန့်တွင် ရေးခဲ့သော ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် အခြားခရစ်ဝင်ကျမ်းသုံးကျမ်း၌မပါသော အချက်အလက်များကို ပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားသည်။
တမန်တော်ယောဟန်သည် မိမိ၏ခရစ်ဝင်ကျမ်းကို တိကျသောရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုဖြင့် ရေးသားခဲ့၏။ ယင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သူဤသို့ရေးသည်– “ယေရှုသည် ခရစ်တော်တည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကို သင်တို့သည်ယုံမည်အကြောင်း၊ ထိုသို့ယုံ၍ နာမတော်အားဖြင့်အသက်ကိုရမည်အကြောင်း ဤမျှလောက် ရေးထားလျက်ရှိသတည်း။” (ယော. ၂၀:၃၁) ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင်ပါရှိသော သတင်းစကားများသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အလွန်ပင်တန်ဖိုးရှိလှပေသည်။—ဟေဗြဲ ၄:၁၂။
နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်သည် ယေရှုကို တွေ့သောအခါ “ဤလောက၏အပြစ်ကို ဆောင်သွားသော ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်ကိုကြည့်လော့” ဟု ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ကြွေးကြော်ခဲ့သည်။ (ယော. ၁:၂၉) ယေရှုသည် ရှမာရိပြည်၊ ဂါလိလဲပြည်၊ ယုဒပြည်နှင့် ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက်ဒေသများကို ခရီးလှည့်လည်ပြီး ဟောပြောသွန်သင်ကာ အံ့ဖွယ်အမှုများပြုသဖြင့် ‘လူများတို့သည် အထံတော်သို့ရောက်လာ၍ ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်ကြ၏။’—ယော. ၁၀:၄၁၊ ၄၂။
ယေရှုပြုလုပ်ခဲ့သည့် အထူးခြားဆုံးအံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုမှာ လာဇရုကို ရှင်ပြန်ထမြောက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ လေးရက်ကြာသေနေသူသည် အသက်ပြန်ရှင်လာကြောင်း လူတို့တွေ့သောအခါ ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်ကြ၏။ သို့သော် ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့် ဖာရိရှဲတို့သည် ကိုယ်တော်ကိုသတ်ရန် တိုင်ပင်ကြလေသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ထိုအရပ်မှထွက်၍ “တောနှင့်အနီး ဧဖရိမ်အမည်ရှိသောမြို့သို့ကြွ” တော်မူ၏။—ယော. ၁၁:၅၃၊ ၅၄။
၁:၃၅၊ ၄၀—နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်နှင့်အတူ ရပ်နေသော တပည့်နှစ်ဦးတွင် တစ်ဦးမှာအန္ဒြေဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ဦးမှာ မည်သူနည်း။ ဇာတ်ကြောင်းပြောသူသည် နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်ကို “ယောဟန်” ဟုအမြဲခေါ်ဆိုပြီး မိမိအမည်ကိုမူ မိမိ၏ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် လုံးဝမဖော်ပြထားပေ။ ထို့ကြောင့် အမည်မဖော်ပြထားသောတပည့်မှာ ခရစ်ဝင်ကျမ်းရေးသူ ယောဟန်ပင်ဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားသည်။
၂:၂၀—“အနှစ်လေးဆယ့်ခြောက်နှစ်ပတ်လုံး” တည်ဆောက်ခဲ့သော ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်မှာ အဘယ်ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်နည်း။ ယုဒဘုရင်ဟေရုဒ် ပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့သော ဇေရုဗဗေလ၏ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်ကို ဂျူးတို့ရည်ညွှန်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဂျူးသမိုင်းဆရာဂျိုစီဖတ်စ်၏အဆိုအရ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် ဟေရုဒ်နန်းစံ ၁၈ နှစ်မြောက် သို့မဟုတ် ဘီစီ ၁၈/၁၇ တွင်အစပြုခဲ့၏။ ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်၏သန့်ရှင်းရာဌာနနှင့် အခြားအဓိကအဆောက်အအုံများကို ရှစ်နှစ်အတွင်း တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းမူကား အေဒီ ၃၀၊ ပသခါပွဲအချိန်ကိုပင် ကျော်လွန်ခဲ့ရာ ထိုအချိန်တွင် ဂျူးတို့က အနှစ်လေးဆယ့်ခြောက်နှစ်ပတ်လုံး ဤဝတ်ပြုရာအိမ်တော်ကို တည်ဆောက်ရသည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၅:၁၄—ဖျားနာခြင်းသည် အပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းကြောင့်လော။ ထိုသို့အမြဲ မယူမှတ်သင့်ပါ။ ယေရှု ကုသပေးသူသည် အမွေရထားသည့်မစုံလင်မှုကြောင့် ၃၈ နှစ်တိုင် ဝေဒနာခံစားခဲ့ရသည်။ (ယော. ၅:၁-၉) ယခု ထိုသူသည် သနားကြင်နာမှုခံစားရသောကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းလမ်းစဉ်ကို လိုက်လျှောက်ရမည်၊ ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ စိတ်လိုကိုယ်လျောက်အပြစ်ပြုပါက ရောဂါဝေဒနာထက် သာ၍ဆိုးသောအရာကို သူကြုံတွေ့နိုင်သည်ဟု ယေရှု ဆိုလိုနေခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသူသည် ခွင့်မလွှတ်ထိုက်သောအပြစ် ကျူးလွန်မိနိုင်ပြီး ထမြောက်ခြင်းမျှော်လင့်ချက်မရှိသည့် သေဒဏ်ခံရနိုင်သည်။—မ. ၁၂:၃၁၊ ၃၂; လု. ၁၂:၁၀; ဟေဗြဲ ၁၀:၂၆၊ ၂၇။
၅:၂၄၊ ၂၅—“သေခြင်းမှအသက်ရှင်ခြင်းသို့ ကူးမြောက်သောသူ” တို့ကား မည်သူတို့နည်း။ တစ်ချိန်က ဝိညာဉ်ရေးအရ သေသွားခဲ့သော်လည်း ယေရှု၏စကားကိုကြား၍ ကိုယ်တော့်ကိုယုံကြည်လာပြီး အပြစ်လမ်းစဉ်ကို ဆက်မလျှောက်သူတို့အကြောင်း ကိုယ်တော်ပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည် သေပြစ်မခံရတော့ဘဲ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းကြောင့် ထာဝရအသက်မျှော်လင့်ချက် ရရှိသဖြင့် “သေခြင်းမှအသက်ရှင်ခြင်းသို့ ကူးမြောက်သောသူ” များဖြစ်ကြ၏။—၁ ပေ. ၄:၃-၆။
၅:၂၆; ၆:၅၃—တစ်စုံတစ်ဦး၌ ‘အသက်ရှိသည်’ ဟုဆိုခြင်းသည် အဘယ်အရာကိုဆိုလိုသနည်း။ ယင်းသည် ယေရှုခရစ် အတွက်ဆိုလျှင် ဘုရားသခင်ထံမှရသောအစွမ်းတန်ခိုးနှစ်မျိုးကို ဆိုလိုသည်။ ယင်းတို့မှာ ယေဟောဝါရှေ့တော်၌ ကောင်းသောရပ်တည်မှုကို လူသားတို့အား ပေးနိုင်စွမ်းရှိခြင်းနှင့် သေသူများကို ရှင်ပြန်ထမြောက်စေခြင်းဖြင့် အသက်ပေးနိုင်စွမ်းရှိခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ယေရှု၏နောက်လိုက်များအတွက်မူ ‘သူတို့၌ အသက်ရှိသည်’ ဟုဆိုခြင်းသည် ပြည့်ဝစုံလင်သောအသက်ရရှိခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ဝိညာဉ်တော်ဖွားခရစ်ယာန်များသည် ကောင်းကင်အသက်တာသို့ ထမြောက်ချိန်တွင် ထိုအသက်ကို ရရှိကြသည်။ မြေကြီးမျှော်လင့်ချက်ရှိသော သစ္စာရှိသူများမူ ခရစ်တော်၏အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးမှုပြီးနောက် နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုကို အောင်မြင်ပြီးမှသာ ပြည့်ဝစုံလင်သောအသက်ကို ရရှိပါလိမ့်မည်။—၁ ကော. ၁၅:၅၂၊ ၅၃; ဗျာ. ၂၀:၅၊ ၇-၁၀။
၆:၆၄၊ ၆၅—ယေရှုသည် ယုဒရှကာရုတ်ကို ရွေးချယ်ချိန်ကတည်းက မိမိကို ယုဒ သစ္စာဖောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိသလော။ ကိုယ်တော် မသိခဲ့ပါ။ သို့သော် အေဒီ ၃၂ ခုနှစ်၏ တစ်ချိန်တွင် ကိုယ်တော်က “သင်တို့တွင် ရန်သူတစ်ယောက်ပါသည်” ဟု တမန်တော်များအား မိန့်တော်မူ၏။ ယုဒရှကာရုတ်သည် မှားယွင်းသောလမ်းစဉ်ကို ‘အစပြု’ နေကြောင်း ထိုအချိန်တွင် ကိုယ်တော်သတိပြုမိခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။—ယော. ၆:၆၆-၇၁။
၂:၄။ နှစ်ခြင်းခံယူပြီးသော ဘုရားသခင့်ဝိညာဉ်တော်ဖွားသားတစ်ဦးအဖြစ် မိမိသည် ကောင်းကင်ခမည်းတော်၏ ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်ကြောင်း မာရိကို ယေရှုဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် မိမိ၏ဓမ္မအမှုကို အစပြုရုံသာရှိသေးသော်လည်း ပူဇော်ရာယဇ်အဖြစ် သေခြင်းအပါအဝင် အခြားတာဝန်များ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချိန်ကို ကိုယ်တော် ကောင်းစွာသိတော်မူ၏။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင့်အလိုတော်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ရာတွင် မာရိကဲ့သို့ ရင်းနှီးသည့် မိသားစုဝင်ပင်ဖြစ်ပါစေ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခွင့်မပြုနိုင်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့လည်း ယေဟောဝါဘုရားသခင်ကို ဝတ်ပြုရာတွင် အလားတူစိတ်ပိုင်းဖြတ်ချက်ရှိသင့်၏။
၃:၁-၉။ ဂျူးအရာရှိတစ်ဦးဖြစ်သူ နိကောဒင်၏ပုံသက်သေမှ သင်ခန်းစာနှစ်ခု သင်ယူနိုင်သည်။ ပထမ၊ နိကောဒင်သည် နှိမ့်ချမှု၊ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုရှိပြီး မိမိ၏ဝိညာဉ်ရေးလိုအပ်ချက်ကို သိရှိသည်။ ထို့ပြင် နိမ့်ကျသောလက်သမား၏သားကို ဘုရားသခင်စေလွှတ်သောဆရာတစ်ဦးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ ယနေ့လည်း ခရစ်ယာန်စစ်များသည် နှိမ့်ချမှုတင်ပြဖို့လို၏။ ဒုတိယ၊ နိကောဒင်သည် ယေရှု မြေကြီးပေါ်ရှိစဉ် တပည့်တစ်ဦး မဖြစ်လာခဲ့ပေ။ အကြောင်းမှာ လူကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ ဆဲန်ဟီဒရင်တွင် ရာထူးပြုတ်သွားမည်ကို စိုးရိမ်ခြင်း သို့မဟုတ် စည်းစိမ်ဥစ္စာကို တွယ်တာခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေမည်။ ယင်းမှ အဖိုးတန်သင်ခန်းစာတစ်ခု သင်ယူနိုင်၏– ထိုသို့သောသဘောထားများကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ‘ကိုယ်လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို နေ့တိုင်းထမ်း၍ ယေရှု နောက်သို့လိုက်’ ခြင်းမှ ပြန်လှည့်မသွားသင့်ပေ။—လု. ၉:၂၃။
၄:၂၃၊ ၂၄။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုကို ဘုရားသခင်လက်ခံစေရန် ယင်းသည် ကျမ်းစာတွင်ပါသော အမှန်တရားနှင့်ကိုက်ညီပြီး သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လမ်းညွှန်မှုအတိုင်း ဖြစ်ရမည်။
၆:၂၇။ “ထာဝရအသက်နှင့်အမျှ တည်တတ်သောအစာ” အတွက် လုပ်ဆောင်ခြင်းဟူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်ရေးလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းရန် ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့ ပျော်ရွှင်ကြ၏။—မ. ၅:၃။
၆:၄၄။ ယေဟောဝါသည် ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးစီကို ဂရုစိုက်တော်မူ၏။ ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးစီထံရောက်ရှိသော ဟောပြောခြင်းလုပ်ငန်းအားဖြင့်၊ ကျမ်းစာအမှန်တရားကို နားလည်ကာ ကျင့်သုံးရန် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် ကူညီပေးခြင်းအားဖြင့် မိမိသားတော်ထံ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆွဲဆောင်တော်မူသည်။
၁၁:၃၃-၃၆။ ခံစားချက်ကိုဖော်ပြခြင်းသည် ပျော့ညံ့သောလက္ခဏာမဟုတ်ပေ။
အေဒီ ၃၃ ပသခါပွဲကျင်းပခါနီးပြီဖြစ်၍ ယေရှုသည် ဗေသနိရွာသို့ ပြန်တော်မူ၏။ နိသန်လ ၉ ရက်တွင် ကိုယ်တော်သည် မြည်းကလေး ကိုစီးကာ ယေရုရှလင်သို့ ကြွလာတော်မူသည်။ နိသန် ၁၀ ရက်တွင် ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်သို့ နောက်တစ်ကြိမ် ကြွတော်မူ၏။ ခမည်းတော်၏နာမကို ချီးမြှောက်တော်မူပါဟု ယေရှုဆုတောင်းသောအခါ “ငါချီးမြှောက်ခဲ့ပြီ၊ တစ်ဖန်ချီးမြှောက်ဦးမည်” ဟုကောင်းကင်မှစကားသံ ထွက်ပေါ်လာသည်။—ယော. ၁၂:၂၈။
ပသခါညစာစားပွဲကို စားနေကြစဉ် ယေရှုသည် နောက်လိုက်များနှင့်ခွဲခွာခါနီးပြီဖြစ်၍ ဆုံးမစကားများပြောပြီး သူတို့အတွက် ဆုတောင်းပေးခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ဖမ်းဆီးခံရ၊ စစ်ဆေးမေးမြန်းခံရ၊ သစ်တိုင်တင်သတ်ခံရပြီးနောက် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့၏။
၁၄:၂—ယေရှုသည် မိမိ၏သစ္စာရှိနောက်လိုက်များအတွက် ကောင်းကင်တွင် “နေစရာအရပ်ကို” မည်သို့ “ပြင်ဆင်” မည်နည်း။ ယင်းတွင် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှောက် ခစားကာ မိမိအသွေး၏တန်ဖိုးကို ဆက်သခြင်းဖြင့် ပဋိညာဉ်သစ်ကို ယေရှု အတည်ပြုခြင်း ပါဝင်ပေမည်။ ထို့ပြင် ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်တွင် ဘုရင့်အာဏာကို ခရစ်တော်ရရှိခြင်းလည်း ပါဝင်ပေမည်။ ထိုသို့ရရှိပြီးနောက် ဝိညာဉ်တော်ဖွားနောက်လိုက်များ၏ ကောင်းကင်ထမြောက်ခြင်း စတင်မည်ဖြစ်သည်။—၁ သက်. ၄:၁၄-၁၇; ဟေဗြဲ ၉:၁၂၊ ၂၄-၂၈; ၁ ပေ. ၁:၁၉; ဗျာ. ၁၁:၁၅။
၁၄:၁၆၊ ၁၇; ၁၆:၇၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၄—ဥပဇ္စျာယ်ဆရာ သို့မဟုတ် သမ္မာတရားကိုပြသော ဝိညာဉ်တော်ကို ရည်ညွှန်းသောအခါ ယောဟန် ၁၄:၁၆၊ ၁၇ တွင် “ထို” ဟူသော နာမ်စားကိုသုံးသော်လည်း ယောဟန် ၁၆:၇၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၄ တွင် “သူ” ဟူသောနာမ်စားကို အဘယ်ကြောင့်သုံးသနည်း။ အကြောင်းမှာ သဒ္ဒါစည်းမျဉ်းအတိုင်း အတိအကျလိုက်သောကြောင့်ဖြစ်၏။ ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကို ဂရိဘာသာစကားဖြင့် ရေးသားခြင်းဖြစ်ရာ ထိုဘာသာစကားတွင် “ဥပဇ္စျာယ်ဆရာ” ဟူသောစကားလုံးသည် ပုလ္လိင်ဖြစ်ပြီး “ဝိညာဉ်တော်” ဟူသောစကားလုံးသည် နပုလ္လိင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဥပဇ္စျာယ်ဆရာပြုလုပ်မည့်အရာများအကြောင်း ယေရှုပြောဆိုရာကို ယောဟန် မှတ်တမ်းတင်ရာတွင် “သူ” သို့မဟုတ် “သူ့ကို” ကဲ့သို့သော ပုလ္လိင်နာမ်စားများ အသုံးပြုခဲ့သည်။ သမ္မာတရားကိုပြသောဝိညာဉ်တော်က ပြီးမြောက်စေမည့်အရာများအကြောင်း ပြောဆိုရာတွင် နပုလ္လိင်နာမ်စား “ထို” ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
၁၉:၁၁—မိမိကိုအပ်နှံသူအကြောင်း ပိလတ်မင်းအား ယေရှုပြောဆိုသောအခါ ယုဒရှကာရုတ်ကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သလော။ ယုဒ သို့မဟုတ် အခြားတစ်စုံတစ်ဦးကို သတ်သတ်မှတ်မှတ် ပြောဆိုနေခြင်းမဟုတ်ဘဲ မိမိအားသတ်သောအပြစ်ကျူးလွန်ရာတွင် ပါဝင်သူအားလုံးကို ယေရှု ရည်ညွှန်းနေခြင်းဖြစ်ဟန်တူသည်။ ထိုသူတို့တွင် ယုဒ၊ “ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့် လူအကြီးအကဲ၊ လွှတ်အရာရှိအပေါင်း၊” ဗာရဗ္ဗကိုလွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုဖို့ တိုက်တွန်းသွေးဆောင်ခံရသော “လူအစုအဝေးတို့” ပါဝင်သည်။—မ. ၂၆:၅၉-၆၅; ၂၇:၁၊ ၂၊ ၂၀-၂၂။
၂၀:၁၇—ယေရှုက မာဂဒလမာရိအား မိမိကိုမဖက်နှင့်ဟု အဘယ်ကြောင့် ပြောခဲ့သနည်း။ ယေရှု ကောင်းကင်သို့ တက်ကြွခါနီးပြီဖြစ်၍ ကိုယ်တော့်ကို နောက်ဘယ်တော့မျှ မြင်ရတော့မည်မဟုတ်ဟု မာရိ ယူမှတ်သောကြောင့် ဖက်ထားခြင်းဖြစ်ပုံရသည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှုက ကောင်းကင်သို့ မိမိမတက်ကြွသေးကြောင်း မာရိစိတ်ချစေရန် မိမိကို မဖက်နှင့်ဦးဟုပြောပြီး မိမိထမြောက်ကြောင်း သတင်းကောင်းကို တပည့်များအား သွားပြောပြပါဟု မှာကြားလေသည်။
၁၂:၃၆။ ကျွန်ုပ်တို့သည် “အလင်း၏သား” များ သို့မဟုတ် အလင်းဆောင်သူများဖြစ်ရန် သမ္မာကျမ်းစာမှ တိကျမှန်ကန်သောအသိပညာကို ရယူဖို့လိုသည်။ ထို့နောက် အခြားသူများလည်း ဝိညာဉ်ရေးအမှောင်ထုမှ ဘုရားသခင်၏အလင်းတော်ထဲ ရောက်လာစေရန် ထိုအသိပညာကို အသုံးပြုရမည်။
၁၄:၆။ ကျွန်ုပ်တို့ ဘုရားသခင့်မျက်နှာသာ ရရှိနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သာဖြစ်သည်။ ယေရှုကို ယုံကြည်ကြောင်းတင်ပြပြီး ကိုယ်တော့်ပုံသက်သေကို လိုက်လျှောက်ခြင်းဖြင့်သာ ယေဟောဝါထံ ချဉ်းကပ်နိုင်ကြသည်။—၁ ပေ. ၂:၂၁။
၁၄:၁၅၊ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၄; ၁၅:၁၀။ ဘုရားသခင့်အလိုတော်ကို နာခံခြင်းက ကိုယ်တော်နှင့်ကိုယ်တော့်သားတော်၏မေတ္တာတွင် တည်နေရန် ထောက်ကူပေးလိမ့်မည်။—၁ ယော. ၅:၃။
၁၄:၂၆; ၁၆:၁၃။ ယေဟောဝါ၏ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဆရာအဖြစ်၊ မှတ်မိစေသူအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ အမှန်တရားများကိုလည်း ဖော်ပြပေးသည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းသည် အသိပညာ၊ ဉာဏ်ပညာ၊ ထိုးထွင်းသိမြင်မှု၊ ချင့်ချိန်သုံးသပ်နိုင်စွမ်းနှင့် စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းတို့ တိုးများစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီပေးနိုင်သည်။ သို့ဖြစ်၍ စွဲစွဲမြဲမြဲဆုတောင်းပြီး ဝိညာဉ်တော်အတွက် သတ်သတ်မှတ်မှတ် တောင်းလျှောက်သင့်သည်။—လု. ၁၁:၅-၁၃။
၂၁:၁၅၊ ၁၉၊ ကဘ။ ယေရှုက ပေတရုအား “ဤအရာများ၊” တစ်နည်းအားဖြင့် သူတို့ရှေ့တွင်ရှိနေသော ငါးများထက် မိမိကို သာ၍ချစ်သလောဟု မေးခဲ့သည်။ သို့ဖြင့် ငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းထက် ယေရှုနောက်သို့ အချိန်ပြည့်လိုက်ခြင်းကို ပေတရု ရွေးချယ်ဖို့လိုကြောင်း ကိုယ်တော် အလေးပေးပြောဆိုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လည်း ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှတ်တမ်းများကို သုံးသပ်ပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆွဲဆောင်သော မည်သည့်အရာထက်မဆို ယေရှုကို သာ၍ချစ်ရန် ခိုင်မာစွာသန္နိဋ္ဌာန်ချနိုင်ကြပါစေ။ မှန်ပါသည်၊ ကိုယ်တော့်နောက်သို့ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ဆက်၍လိုက်နေကြပါစို့။
[စာမျက်နှာ ၃၁ ပါပုံစာ]
နိကောဒင်၏ပုံသက်သေမှ ကျွန်ုပ်တို့ အဘယ်အရာသင်ယူနိုင်သနည်း
“တန်ဖိုးမဲ့သောအရာများ” ကို ငြင်းပယ်လော့
အရာရာတိုင်းတွင် ဘုရားသခင့်လမ်းပြမှုကို ရှာဖွေလော့
လူငယ်တို့၊ ယခုပင် သင့်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ကို အောက်မေ့လော့
ဤဆုံးခန်းကာလတွင် ထိမ်းမြားခြင်းနှင့် မိဘဖြစ်ခြင်း
အဘယ်အရာက ဘဝကို တန်ဖိုးရှိစေသနည်း
စာသား စာပေ ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် ဧပြီ ၂၀၀၈
ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် ဧပြီ ၂၀၀၈